အောက်ပါဟိုတယ်များသည် ဆေးရုံကြီးနှင့်နီးပြီး၊ ဘမ်ရွန်ဂရက်၏လူနာများအတွက် အထူးစျေးနှုန်းများကို ထားရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သေချာစွာ ရွေးချယ်ထားပါသည်။
ဘမ်ရုန်ရက်ဒ်ဆေးရုံကြီးမှ (၁) မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ရသော ကြယ် (၄) လုံး ဟိုတယ်။ ပါဝင်သောအထောက်အပံ့များမှာ ရေကူးကန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဝင်နိုင်ခြင်း။
ဧည့်သည်အခန်း (၉၈)ခန်းပါရှိသော ကြော့မော့သပ်ရပ်ပြီး ပရိဘောဂများဖြည့်ထားသည့် ဟိုတယ်။ ဟိုတယ်မှ Chit BTS Station သို့ ရောက်ရန် ၁၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်ရပြီးဆေးရုံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိပါသည်။
Sukhumvit Soi 3တည်ရှိပြီး စည်ကားသောအာရပ်ဈေးတန်းသို့ ၂မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။ THB 1,200++ တစ်ညနှင့်မနက်စာပါဝင်ပြီး၊ကုတင်အပို နှင့် wifi ပါဝင်ပါသည်။
Sukhumvit Soi3တွင် တည်ရှိသည်။ ဘမ်ရုန်ရက်ဒ်ဆေးရုံကြီးမှ (၁) မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ရသည်။ ငွေပေးချေမှု။ ။ ဘိုကင်ကို သေချာစွာ ပြုလုပ်ရန် အတွက် သင်၏အကြွေးကတ်အချက်အလက်များကို ပေးပါ။ ဤကဲ့သို့ ကြိုတင်နေရာယူခြင်းအတွက် အဖိုးအခ မပေးရပါ။
Located on Sukhumvit Soi 1/1. Wheelchair Access. ငွေပေးချေမှု။ ။ ဘိုကင်ကို သေချာစွာ ပြုလုပ်ရန် အတွက် သင်၏အကြွေးကတ်အချက်အလက်များကို ပေးပါ။ ဤကဲ့သို့ ကြိုတင်နေရာယူခြင်းအတွက် အဖိုးအခ မပေးရပါ။
Sukhumvit Soi 1 တွင် တည်ရှိသည်။ ဘမ်ရုန်ရက်ဒ်ဆေးရုံကြီးမှ (၁) မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ရသည်။ ငွေပေးချေမှု။ ။ ဘိုကင်ကို သေချာစွာ ပြုလုပ်ရန် အတွက် သင်၏အကြွေးကတ်အချက်အလက်များကို ပေးပါ။ ဤကဲ့သို့ ကြိုတင်နေရာယူခြင်းအတွက် အဖိုးအခ မပေးရပါ။
Please Select Best Western Premier FurumaXclusive Hotel Zenith Hotel Three Sukhumvit Hotel Adlib Hotel Fraser Suites Phachara Suites